आफ्नै आमाको अगाडी ६ वर्षिय छोराको घाँटी रेटियो ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
आफ्नै आमाको अगाडी ६ वर्षिय छोराको घाँटी रेटियो !
असार ५ गते, २०७६ - १२:११
पवित्र मस्जिद मानिने साउदीको पैगंबर मुहम्मदको पवित्र मस्जिदमा एक महिला दर्शनको लागि पुगेकी थिइन् । जहाँ सिया मुसलमान हो की सुन्नी भन्ने विषयमा प्रश्न गर्दा उनले आफुलाई सिया मनपर्ने उत्तर दिएकी थिइन् ।
उनले उत्तर दिएको केही समयमा नै कार आयो र् उनीबाट छोरा खोसियो । त्यसपछि उनको छोरालाई केही समयमा नै सिसाको टुक्राले रेट्न खोजियो । ती बालकको टाउको सिसाकै टुक्राले रेटेर निर्मम हत्या गरियो ।
आफ्नै आँखा अगाडी छोराको यो हालत देख्न नसकेकी महिला रुदै चिच्याएर रोइरहिन् । तर त्यहाँ उनको त्यो चित्कार सुन्ने कोही थिएनन् ।
सुन्नी मुस्लिमको बाहुल्यता रहेको साउदी अरबमा सुन्नी मुस्लिमको कारण सिया मुस्लिमहरु पिडित हुने गर्छन् ।
असार ५ गते, २०७६ - १२:११ मा प्रकाशित
सेना र अज्ञात हतियारधारीबीच हमलामा पन्ध्र जनाको मृत्यु
ट्रर्कीको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारिदिने अमेरिकी राष्ट्रपतिको चेतावनी, व्यापार सम्झौता अन्त्य गर्ने घोषणा
हवाई कारबाहीमा नौ लडाकूको मृत्यु
बदलीपुर गाउँमा सिलिण्डर पड्किँदा २ तले घर भत्कियोः १० जनाको मृत्यु, १५ जना घाइते
ग्यास विस्फोट भएर रेष्टुरेन्टमा आगलागीः ६ को मृत्यु, ९ घाइते
६७ वर्षीय मजदूरले अपार्टमेन्टमा गोली चलाउदा चार जनाको मृत्यु
जापानमा ६० वर्ष यताकै शक्तिशाली आँधी, १४ को मृत्यु, कयौं शहरहरु जलमग्न